लेहंगा लगाउन नपाउँदा धरधरी रोएँ श्वेता खड्का भिडियो – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/लेहंगा लगाउन नपाउँदा धरधरी रोएँ श्वेता खड्का भिडियो
काठमाडौ । पछिल्ला दिनहरुमा कलाकारिता भन्दा पनि समाजसेवामा ज्यादा लागिरहेकी अभिनेत्री श्वेता खड्काले स्व. अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको ‘कहाँ भेटिएला’बाट नेपाली फिल्ममा पाइला राखेकी थिईन् । उनै स्व. श्रीकृष्णकै अर्को फिल्म ‘कोहिनुर’ खेलेपछि उनीहरूले विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए ।
दुर्भाग्य भन्नुपर्छ विवाहको एक महिनामा नै स्वेताका श्रीमान श्रीकृष्णले स्वता अनी संसार छोडेर विदा भैसकेका थिए । त्यसपछि वि’क्षिप्त बनेकी श्वेता अहिले नयाँ जीवन बाँचिरहेकी छिन्, उनलाई उनको परिवारले पनि खुबै साथ दिएको छ । बुहारी भए पनि उनलाई छोरीको रुपमा हेरिएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा उनको स्वास्थ्यमा पनि केही समस्या आएको बताइन्छ । तत्काल उनी ‘श्वेता श्री फाउन्डेसन’मार्फत माझी बस्ती निर्माणमा थिईन ।
उनले यस्ता सामाजिक कामहरु गर्न थालेको पनि धेरै समय भएको छ । उनले केही सहयोग त धेरै आफैंले रकम जुटाएर वस्ति निर्माण गरेको विषय सबै तिर तारिफ गर्न लाएक छ । गेकी स्वेतालाई अहिले जीवन धेरै लामो भएको जस्तो लाग्छ
पति सम्पर्क विहिन, छोरा छोरीलाई किताब किन्न सकिन के खाने के लगाउने भन्दै भक्कानिइन् सबिता